musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Zvinyorwa zvinowira paBillund Airport
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Denmark Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Kununura mhedzisiro-yakamboitika munhoroondo yendege, gore rayo rechisere rakateedzana rekukura kwevatakurwi, rakaburitsa yakasimba yakazara 9.2% kuwedzera.
Kumashure kwegore rakapaza rekodhi mu2016, Billund Airport yakatenderedza mwedzi gumi nembiri yekupedzisira iine ese-nguva marefu mune vese vafambi traffic uye nhumbi. Kugamuchira vamwe vatakuri 12 kupfuura mugore rapfuura kwakakonzera huwandu hwevatakuri vanosvika mamirioni 284,000 vachifamba negedhi rakawandisa reWest Denmark muna3.4. Kuwedzera pamhedzisiro yemigwagwa yevatakuri, huwandu hwezvinhu hwakasvika pamatanho kuBillund nendege ichitakura 2017 matani, 73,000 % gore-pagore kuwedzera.
Kununura mhedzisiro-yakamboitika munhoroondo yendege, gore rayo rechisere rakateedzana rekukura kwevatakurwi, rakaburitsa yakasimba yakazara 9.2% kuwedzera. Traffic yaBillund yepasi rose yakakwira neinoshamisa 13.8%: "Migwagwa yedu yepasi rose yagadzira kukura kwakakura mumakore mashoma apfuura, ne2017 isiri iyo," anotsanangura Kjeld Zacho Jørgensen, CEO, Billund Airport. "Nzvimbo yedu yekutora inosanganisira maguta manomwe makuru ekuWest Danish uye kufambira mberi kwehupfumi munzvimbo medu kwave kuonekwa pamwedzi gumi nembiri yapfuura. Nzvimbo yedu yakasimba yevatengi iri kutora mukana wekuwedzera nzira yedu uye kusimbisa chinzvimbo chaBillund senhandare yendege yeWest Denmark, ”anowedzera Jørgensen.
Zvidhinha zvekuvakira ramangwana
Billund akatogadzira imwe migwagwa mitsva mishanu uye imwe nendege nyowani yekuchengetedza kufambira mberi kwendege muna 2018. Kick-kutanga mwaka wezhizha, Wizz Air inotanga kubatana kwakananga kwendege kuIasi, guta rechipiri pakukura muRomania, ine kaviri-vhiki svondo kubva 30 Kubvumbi. Mutakuri wemutengo wakaderera-mutengo weHungary acherechedzawo kutanga kwemwaka wechando waBillund achizivisa svondo rino kuvhurwa kwekubatanidza kwakanyanya-kunodiwa kuVienna - makore gumi apfuura aona kuwedzera kwakatsiga kwegore-ne-gore kwenzira isina kunanga iro guta guru, i10 ichinyora inguva-yakareba ye2017 maDanes anoshanyira Austria.
Kutanga basa katatu pavhiki kuBergen zhizha rinotevera, Billund achagamuchira kusvika kweshamwari yake nyowani yendege, Widerøe. Kubatana nendege dziripo nendege neBergen neOslo Gardermoen, nendege nyowani dzichaona Billund achipa padhuze ne40 nendege kuNorway vhiki imwe neimwe muS18.
Gare gare muS18, Billund achawedzera maviri matsva ekubatanidza kuAthens sezvo Ryanair inotanga sevhisi vhiki nevhiki kubva pa15 Chivabvu, uye Primera Air inotangisa yayo 19 sevhisi kubva kuWest Denmark nebasa revhiki nevhiki kuguta guru reGreek kubva 23 Chivabvu.
"Tiri kutarisira kune rimwe gore rekuvandudza kubatana kwedu nenyika," anodaro Jørgensen. "Mumakore matatu anotevera tichange tichiisa mari muzvivakwa zvedu kuti titsigire zano redu mukupa nhandare yendege uye, nekutenda kune vamwe vedu vachisimbisa migwagwa mitsva, pamwe nekuwanda kwezviitiko pamabasa aripo akabudirira, tinogona kuenderera mberi nerwendo rwedu zvibereko zvakanaka pamwe chete. ”